प्याथोलोजी सेवाको नजरअन्दाज - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- डा. रुणा झा
ओपीडी र वार्डको भीडभन्दा टाढा प्रयोगशालाभित्र हुने परीक्षण सेवा र बिरामीको सम्पर्कमा धेरै नआउने प्याथोलोजिस्टलाई जस दिएको देखिँदैन ।
कार्तिक २९, २०७४-क्यान्सर वा अर्वुद रोग यस्तो समूहको रोग हो, जसमा शरीरको कुनै तन्तु अनियन्त्रित रूपमा बढ्न थाल्छ र वरिपरिका अंगहरूमा मात्र नभई शरीरका अन्य अंगहरूमा समेत फैलिएर सो अंगको गतिविधिमा समेत असर गर्छ र अन्तत: बिरामीको मृत्यु नै हुन्छ । यस्तो रोगबारे समयमै थाहा पाउन सकिए क्यान्सरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यस क्यान्सर रोग निदानको लागि नभई नहुने सेवा हो, प्याथोलोजी । प्याथोलोजी २ वटा ग्रिक शब्द प्याथोज (रोग) र लोगोज (ज्ञान मिलेर बनेको) अथवा रोगसम्बन्धी ज्ञान लिने विषयलाई प्याथोलोजी भनिन्छ । प्याथोलोजीलाई प्रमाणमा आधारित आधुनिक चिकित्साको मेरुदण्ड मानिन्छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका ७० प्रतिशत निर्णयहरू प्याथोलोजीको नतिजामा आधारित हुन्छ । प्याथोलोजीको अभ्यास सबै क्लिनिकल विषयसँग जोडिएको छ । त्यसमध्ये पनि क्यान्सरको निदान सम्बन्धमा अहिलेसम्म पनि प्याथोलोजी परीक्षणलाई नै ‘गोल्ड स्टान्डर्ड’ परीक्षण मानिन्छ ।
› डा. रुणा झा
डेनमार्क पुग्यो विश्वकपमा ›